Vivo Y1sရဲ့ Display ပိုင်းကတော့ IPS LCD သုံးထားပြီးတော့ Resolution ကလည်း720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) လာပေးထားပါတယ်။OS ကိုလည်းAndroid10ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ သူရဲ့ Main camera ကတော့ 13MP နဲ့ Selfie camera ကတော့ 5MPကိုသုံးပေးထားပါတယ်။Batteryကတော့ 4030mAh ပါဝင်လာပါတယ်။
KZG K16 (GSM)
KZG K16 (GSM) လေးကတော့ FM Radio များဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ခြင်း ၊ SD Card ထည့်ပြီး တရားတော်များ ၊ သီချင်းများ နားဆင်နိုင်ခြင်း၊ Record ပါတဲ့အတွက် အသံများဖမ်းယူနိုင်ခြင်း ၊ မြန်မာစာ Zawgyi Font စနစ်ပါလို့ Phone Contacts များ Message များကို မြန်မာဖြင့် ဖတ်နိုင်ခြင်း စတဲ့အားသာချက်များအပြင် (Calculator. Calendar. Alarm) များအသုံးပြုနိုင်သလို ဒီဇိုင်းလည်းလှပသေသပ်ပါတယ်။
Dlan G500 Mini (GSM+CDMA800)
Dlan G500 Mini လေးကတော့ CDMA 800 သုံးတဲ့လူကြီးမင်းတို့အတွက်အဆင်ပြေစေပါတယ်။လိုင်းဆွဲအားအထူးကောင်းမွန်ပြီးလူတိုင်းအကြိုက်တွေ့စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Battery အပိုင်းမှာဆိုရင်လဲ 1700mAh ပါဝင်ပါတယ်။
SYH S3100t Phone
SYH S3100t Phone (GSM) လေးကတော့ FM Radio များဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ခြင်း ၊ SD Card ထည့်ပြီး တရားတော်များ ၊ သီချင်းများ နားဆင်နိုင်ခြင်း၊ Record ပါတဲ့အတွက် အသံများဖမ်းယူနိုင်ခြင်း ၊ မြန်မာစာ Zawgyi Font စနစ်ပါလို့ Phone Contacts များ Message များကို မြန်မာဖြင့် ဖတ်နိုင်ခြင်း စတဲ့အားသာချက်များအပြင် (Calculator. Calendar. Alarm) များအသုံးပြုနိုင်သလို ဒီဇိုင်းလည်းလှပသေသပ်ပါတယ်။
Dlan G830 Mini(800+GSM)Phone
Dlan G830 Mini (CDMA 800+GSM) လေးကတော့ FM Radio များဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ခြင်း ၊ SD Card ထည့်ပြီး တရားတော်များ ၊ သီချင်းများ နားဆင်နိုင်ခြင်း၊ Record ပါတဲ့အတွက် အသံများဖမ်းယူနိုင်ခြင်း ၊ မြန်မာစာ Zawgyi Font စနစ်ပါလို့ Phone Contacts များ Message များကို မြန်မာဖြင့် ဖတ်နိုင်ခြင်း စတဲ့အားသာချက်များအပြင် (Calculator. Calendar. Alarm) များအသုံးပြုနိုင်သလို ဒီဇိုင်းလည်းလှပသေသပ်ပါတယ်။
Red Mi Note95G 8/256GB
Redmi Note95G ရဲ့ Display size ကတော့ 6.53 inch ရှိပြီး Display Type ကိုတော့ IPS LCD,450 nits (typ) ဖြင့်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ Resolution ပိုင်းအနေနဲ့ 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio ပါဝင်ပါတယ်၊၊ Storage ပိုင်းအနေနဲ့ 8/256GB လာပေးထားပါတယ်။ Main Camera ပိုင်းအနေနဲ့ 48MP/8MP/2MP ပါဝင်ပြီး Selfie Camera ပိုင်းကတော့ Single 13MP ပါဝင်ပါတယ်။ Battery ကတော့ Li-Po 5000 mAh, non-removable, Fast charging 18W ဖြစ်ပါတယ်။
Mafe M205 Keypad
Mafe M205 Keypad လေးဟာဆိုရင် Simcard2Sim ဖြစ်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဆင်းကဒ် 2ကဒ်ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Battery အနေနဲ့ 2400 mAh ပါဝင်ပါတယ်။
Vivo Y1s (3/32GB)